पाकिस्तानसँग वार्ता गर्न मोदीलाई इमानुएलको आग्रह
फ्रान्स, ६ भदाै । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याँक्रोले काश्मिर विवाद सुल्झाउनका निम्ति पाकिस्तानसँग वार्ता गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष आग्रह गरेका छन्। ठूला सात औद्योगिक राष्ट्रहरुको समूह (जी७) को बैठकमा सहभागी हुन फ्रान्स पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसमक्ष राष्ट्रपति म्याँक्रोले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
दुई नेताबीच बिहीबार भएको भेटवार्तामा जलवायु परिवर्तन र अरु द्विपक्षीय एवं विश्वका जल्दाबल्दा विषयमा पनि विचारविमर्श भएको थियो । जी७ को बैठक फ्रान्सको बियारिजमा यसै सप्ताहान्तमा बस्दैछ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी उक्त बैठकमा विशेष आमन्त्रित हुन् । जी ७ का सदस्य मुलुकमा संयुक्तराज्य अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जापान, जर्मनी, क्यानडा र इटाली रहेका छन् ।
फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याँक्रोले बिहीबार नै बेलायतका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र ग्रीसका प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा राष्ट्रपति म्याँक्रोले भारत र पाकिस्तानबीच रहेका मतभेद द्विपक्षीय रुपमा सुल्झाउन तथा थप गतिरोध अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।
गत अगस्ट ५ मा मोदीले मुस्लिम बहुल काश्मिरले प्राप्त गरिरहेको विशेष दर्जा समाप्त गर्नुका साथै दशौं हजार थप सुरक्षाकर्मी काश्मिरमा पठाएका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीले भने आफ्नो वक्तव्यमा काश्मिरका विषयमा केही उल्लेख गरेका थिए । एपी
भारतमा कोभिड- १९ : एकैदिन ७७१ को मृत्यु, यस्तो छ पछिल्लो संक्रमणदर
ब्राजिलमा कोरोना महामारीः एक दिनमा ४५ हजार संक्रमित, एक हजारभन्दा बढीको मृत्यू
कोरोनाको कहरमा जापान, संक्रमितको तथ्याङ्क निरन्तर उकालो चढ्दै
भारतीय गृहमन्त्रीलाई कोरोना पोजेटिभ, अस्पताल भर्ना
कोरोना अपडेटः विश्वभर मृत्यु भएकाहरुको संख्या कति पुग्यो ?
कुवेतद्वारा नेपालसहित ३० भन्दा बढी मुलुकका यात्रुलाई प्रवेश निषेध
भारतको समाजवादी पार्टीका पूर्व नेता सिंहको निधन
उत्तर प्रदेशकी क्याबिनेट मन्त्री कमला रानीको कोरोनाबाट मृत्यु
कोरोना अपडेटः भारतमा २४ घण्टामा ५४ हजार संक्रमित भेटिए
कोरोनाबारे छलफल गर्न डब्लूएचओको आपतकालीन बैठक
प्रतिबन्धविरुद्ध जर्मनमा शक्तिशाली प्रदर्शन, १७ हजार मानिस सडकमा
सङ्क्रमण दर तीन प्रतिशतभन्दा कम नहुँदासम्म न्यूयोर्कका विद्यालय नखुल्ने
इराकमा सन् २०२१ को जुन ५ मा निर्वाचनको घोषणा
अमेरिकाले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउन पनि सक्छ : ट्रम्प
नक्कली मदिरा सेवनका कारण ३८ जनाको ज्यान गयो
हङकङमा स्थानीय निर्वाचन एक वर्ष पछि सारियो
सिपाहीले अन्धाधुन्ध गोली चलाए, कम्तीमा १४ को मृत्यु
बालुवाटारको व्यवहारले प्रचण्ड ओछ्यानमा, हतास ओली बालकोटतिर
काठमाडौं, १९ साउन । कुनैबेला विद्रोही माओवादी बालुवाटार धाउँथे, ‘संसदवादी दल’सँग वार्ता गर्न । बालुवाटारमा वार्ता गरेर...
स्वायत्तता खोसिएको जम्मु-कश्मिरको एक वर्ष कस्तो रह्यो ?
गत वर्ष अगष्ट ५ मा संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएको थियो । लद्दाखलाई जम्मु–कश्मिरबाट छुट्याएर भिन्नै केन्द्रशासित प्रदेश...
काठमाडौं, १९ साउन । कतिपय ससाना घटनाहरूको ठूलो अर्थ र सन्देश हुन्छ । झट्ट हेर्दा लाग्दछ– कुन ठूलो कुरा हो र ? तर, त्यसका अन्तर्यहरु...